Medjugorje: Fada Jozo "maka na Our Lady gwara anyi ka anyi buo onu"
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 25, 2020 Maggio 25, 2020
Chineke kere ihe ndị ọzọ niile ma nyefee ha mmadụ; otú ọ di, ọ ghọrọ orù-ya. Anyị riri ọtụtụ ihe: site na nri, site na mmanya, site na ọgwụ ọjọọ, wdg. Mgbe ekpuputara anyi site n’ikpo mmadu n’enweghi ike ime ka anyi gbanwee
Ọ gaghị ekwe omume maka itinye aka ma ọ bụrụ na a chụghị àjà ọ bụla. Anyị nwere ike ime n’enweghị ọtụtụ ihe; inwere ike ibi n’enweghi ulo, dika emere na agha na Mostar na Sarajevo maka otutu. N'ime sekọnd, ndị ahụ enweghị ụlọ. Ihe niile bụ nke akpọnwụ: anyị ga-ezubere ntụkwasị obi anyị naanị na Kraịst: Nke a bụ Ahụ m maka gị, ebe a bụ nri m, Oriri Nsọ. Nwaanyị anyị buru amụma banyere agha ahụ afọ iri tupu mgbe ahụ wee kwuo: "You nwere ike iji ekpere na ibu ọnụ zere ya". Haswa atukwasighi obi na ntughari nke Medjugorje agha aliela.
Nwaanyị anyị kwuru: Kpee ekpere ma buo ọnụ n'ihi na oge adịghị mma. Ọtụtụ na-ekwu na ọ bụghị eziokwu. Mana olee otu nke a si bụrụ eziokwu? Anyị na-ahụ agha taa, mana lee: agha ahụ dị njọ karịa ekweghị na Chineke, ịhụ ihe onwunwe n'anya. Kedu ihe ị chere n’otu nne kwenyere imegbu nwa ya nwoke, dibia nke kwenye ite ime? Ha dịkwa puku! Cannot nweghị ike ikwu na naanị na Bosnia enwere agha, na Europe enwere agha na ebe niile n'ihi na enweghị ịhụnanya; N ’ụlọ ezinaụlọ ahụ e kewapụrụ iche na nkewa, agha na-aga. Nke a bụ ihe mere o ji dị mkpa ibu ọnụ, ka anyị hụ etu Setan si ewulite ụzọ ụgha iji duhie anyị site na ịdị mma.
Taa, Friar Jozo na-agwa anyị banyere amara dị ukwuu nke ndị parish niile nwetara n'oge ibu ọnụ mbụ: ọchịchọ ikwuputa.
Otu ubochi Yakov biara na Nzuko a gwa m na o nwere ozi si n’aka Nwanyi anyi. M zaghachiri ya ka ọ chere maka njedebe nke Mass. Na njedebe m etinye ya n'elu ebe ịchụàjà ma ọ sịrị: "Nwanyị anyị rịọrọ ka e buo ọnụ." Ọ bụ Wenezde.
Ajụrụ m ndị parish ahụ ma ha ghọtara ozi a nke ọma ma atụbakwaara m ọnụ na Tọzdee, Fraịde na Satọde. Fọdụ mere mkpesa na ọ pere mpe. N’ụbọchị ndị ahụ enweghị agụụ agụụ, ndị parish niile hụrụ naanị ịhụnanya maka Madonna. N'ehihie Friday, ọtụtụ puku ndị kwesịrị ntụkwasị obi rịọrọ ka ha kwupụta mmehie ha. Ihe karịrị otu narị ndị nkwupụta ekwupụtaala ehihie na abalị niile. Ọ bụ ihe ịtụnanya. Mgbe ụbọchị ahụ gachara, anyị bidoro ibu ọnụ na Wednesde na Fraịde.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis nyefere China na nwanyị ahụ gọziri agọzi
Next Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa n'ihe isi ike ndị ị na-eche